ဘောလုံးလောင်းကစားမဟာဗျူဟာ | Express ကိုအားကစား & ကာစီနိုလောင်းကစား | အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းသိကောင်းစရာများ
သငျသညျအစဉ်မပြတ်ရံဖန်ရံခါနေရာလိုချင်သူတစ်ဦးခက် core ကို '' အားကစားဇှတျထိုးသမား '' Are '' ကစားပွဲ '', ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့လေးသာမှုနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးဆွေးနွေးပွဲနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ချီတုံချတုံရှာတွေ့, အမှတ်န်, သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းအပေါ်လမ်းကိုသွားဘောလုံးဒိုင်များနှင့် Sports များထက်?
ဟုတ်ကဲ့ပါလျှင်, ထို့နောက်အပန်းဖြေ. ကျနော်တို့ကသငျသညျကျွမ်းကျင်သူပေးရကြာင့်အဘယျသို့ရှိ အလောင်းအစားမဟာဗျူဟာများ မှာအားလုံးအချိန်မ၌သင်တို့ကိုအရေးယူ-အဆင်သင့်မရ.
ကောင်းစွာ, ငါသည်သင်တို့ကိုပြီးသားယင်း၏ကမ္ဘာကြီးခွက်ကိုအချိန်ကိုသိနှင့်ပွဲစဉ်ကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့နည်းနည်းထောင့်ရန်သင့်လမ်းတွေ့ပြီခန့်မှန်းတယ်. ဒါကြောင့်, ပြန်ထိုင်, သောက်ဖမ်းပြီးအပေါ်ကိုဖတ်ရှု.
အမှုအရာဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်နားလည်ရန် ဗျူဟာများ ပိုကောင်းတဲ့, အဆိုပါမကြာခဏအသုံးပြုသောအချို့ကိုကြည့်မယ့်ပါစေ အလောင်းအစား အသုံးအနှုန်းများ, ထိုကဲ့သို့သော '' ပိုက်ဆံလိုင်းများ '' အဖြစ်, '' မသန်မစွမ်း 'နဲ့' အမှတ်န့် ''.
တစ်ဦးက ပိုက်ဆံလိုင်း တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အလောင်းအစား ငွေကိုတပ်ပေါင်းလဒ်ကစားသမားဖော်ပြထားပါတယ်ကြောင်းလိုင်းပေါ်တွင်အလောင်းအစားရမယ်, အလို့ငှာ ပြောတစ်ခုငွေပမာဏကိုအနိုင်ရ $100. တစ်ဦးပိုက်ဆံလိုင်းအလောင်းအစားအနိုင်ရ, သောအဖွဲ့သည် ရိုးရှင်းစွာဂိမ်းအနိုင်ရထားပြီးအပေါ်အလောင်းအစား. ငွေပမာဏသည်စစ်မှန်သောလေးသာမှုထက်ပုံမှန်အတိုင်း fixed လေးသာမှုဝန်းကျင်တည်ဆောက်လျက်ရှိ. သို့သျောလညျး, ကစားသမားကြောင့်ဂိမ်းမှဂိမ်းကနေကွဲပြားစေခြင်းငှါပမာဏ, ကြီးပြင်းလေးသာမှုအပေါ်အခြေခံပြီး.
ပိုကောင်းတဲ့အမှုအရာနားလည်ရန်ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ကြရအောင်. ဘယ်မှာနှစ်သင်းတစ်ဦးမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ဘောလုံးဂိမ်းကိုစဉ်းစားပါ – ငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခြင်း Cowboys များနှင့် Packers, အဆိုပါ NFL ချန်ပီယံအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ကစားနေကြသည်.
Will အောက်ကအပိုဆုစားပွဲတင်ပြီးနောက် Continues ဘောလုံးလောင်းကစားမဟာဗျူဟာဘလော့
ဒါကြောင့်, ဤသည်အလွန်ဥပမာအားဖြင့်မှာ; အဆိုပါ Packers အကြိုက်ဆုံးအပြေးနေကြ – သူတို့၏ထူးဆန်းနေ prefixing ဟာအနုတ်သင်္ကေတအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ် 130, အဆိုပါ Cowboys ဟာအရှုံးသမားစဉ်းစားနေစဉ် – သူတို့၏ထူးဆန်းနေ prefixing အဆိုပါပေါင်းသင်္ကေတအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ် 140.
တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်အပေါ်ဒီတော့, ဒီကစားသမားဖို့ရွေးချယ်သူကိုဆိုလိုသည် အဆိုပါအကြိုက်ဆုံးအပေါ်အလောင်းအစား, ဒီကိစ္စမှာ, အဆိုပါ Packers, အန္တာရာယ်မှရပါလိမ့်မယ် $130 တစ်သေချာငွေပမာဏကိုအနိုင်ရဒေါ်လာ $100. သို့သော်ငြားလည်း, အဆိုပါ Cowboys ဟာအရှုံးသမားပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင်အတွက်အလောင်းအစားဖို့ရှေးခယျြသူကစားသမားများစွန့်စားမှုရှိပါလိမ့်မယ် $100 တစ်သေချာငွေပမာဏကိုအနိုင်ရ $140.
မှတ်ရန်, အများဆုံးပိုက်ဆံလိုင်းများပေမယ့် အလောင်းအစားမဟာဗျူဟာများ ၏ယူနစ်ပါးနေကြသည် $100, ကစားသမားကထက်ပြောင်တစ်ခုငွေပမာဏကိုဆင်နွှဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်. ပိုက်ဆံလိုင်းအထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းတူညီလိုင်းများတလျှောက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဆက်လက်.
ဝေါဟာရ မသန်မစွမ်း တွင် footballbetting တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် နည်းဗျူဟာ ကြောင်း '' ခြားနားစံကိုက်ညှိနှစ်ခုအဖွဲ့များအကြားတစ်ဦးမျှမျှတတနဲ့ညှိပြီးကစားပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေ. In this method, တစ်ခုညှိနှိုင်းမှုပွဲအတွက်ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးအကြိုက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်နှင့်အတူထွက်ပင်မှရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုအပိုအရေအတွက်ကဂိုးသွင်းဖို့ရှိသည်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောအရှုံးသမား၏မျက်နှာသာအတွက်အလေးသာမှဖန်ဆင်းထားသည်. ဒါဟာကွာဟချက်နှင့်ပင်စစ်မှန်သောဆုရှင်ရှိခြင်း၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုထွက်တံတားကူညီပေးသည်.
ဝေါဟာရ အမှတ်န် အဆိုပါ fixed အရေအတွက်ကိုကျော်နှင့်အထက်သွင်းယူရမည်အချက်များ၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်သာလွန်အသင်းအပေါ်ထားရှိသောမသန်မစွမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်. ရဲ့ Cowboys အဆိုပါအောက်မှာခွေးတွေနှင့် Packers အဆိုပါအကြိုက်ဆုံးဆက်လက်တည်ရှိနေကြသည်ဘယ်မှာတူညီတဲ့ဥပမာစဉ်းစားပါစို့.
packers အားဖြင့်အကြိုက်ဆုံးအဖြစ်ရှုမြင်နေတယ်ဆိုရင် 10 Cowboys ကျော်အချက်များ, အမှတ်ပျံ့နှံ့အဖြစ်သတ်မှတ် 10. ဒါကြောင့်, ယခုကစားသမား အလောင်းအစား အဖွဲ့အပေါ် Packers အဆိုပါအနိုင်ရပါလိမ့်မယ် Packers အားဖြင့်အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်အလောင်းအစား 11 အထက်ရမှတ်သို့မဟုတ်, အဆိုပါ Cowboys ၏ရမှတ်ကျော်. သူတို့ရဲ့အသင်းဂိမ်းအနိုင်ရရှိသို့မဟုတ်ခြင်းဖြင့်ရှုံးဖြစ်စေလျှင် Cowboys အပေါ်လောင်းကစားသူများသည်ရိုးရှင်းစွာကစားပွဲအနိုင်ရ9မှတ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း.
Packers အတိအကျသွင်းယူခြင်းဖြင့်အနိုင်ရပါကရလဒ်ကိုလည်းလည်စည်းထဲမှာအဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ် 10 မှတ်. ဒီကိစ္စမှာ, အဆိုပါအလေးသာထွက် evened နှင့်ပိုက်ဆံ shared နေကြတယ်.
Sports.expresscasino.co.uk များအတွက်ဘောလုံးလောင်းကစားမဟာဗျူဟာဘလော့. သငျသညျအနိုင်ရဘယ်အရာကိုသိမ်းဆည်းထားပါ!